एन्ड्रोइड पी आईफोन एक्स | को इशाराहरू द्वारा नेभिगेशन हुन सक्छ ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | हाम्रो बारेमा, टेलिफोनी
अलि अलि अलि हामी धेरै कार्यहरू थाहा पाउन सक्छौं जुन एन्ड्रोइड पीले समावेश गर्दछ। ठूलो अंश मा मार्च मा रिलिज गरिएको पूर्वावलोकनको कारण र विभिन्न लीकको कारण पनि हो। अब हामी फेरी एउटा नयाँ प्रकार्य थाहा पाउन सक्छौं। यद्यपि यो समय एक गुगल असफलताको कारणले पत्ता लगाउन सम्भव भएको छ कि एक स्क्रीनशट अपलोड गरिएको थियो। यो के काम हो? एन्ड्रोइड पीसँग आईफोन एक्स जस्ता इशाराहरूबाट नेभिगेसन हुनेछ.
यस स्क्रिनशटको लागि धन्यवाद जुन कम्पनीले द्रुत रूपमा अपलोड र मेटाईयो, तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ। यो घर जस्तो देखिन्छ र भर्खरका बटनहरू स्क्रिनबाट गायब हुन्छन्। हामी तपाईंलाई तलको यो सम्भव प्रकार्यको बारेमा अझ बढी कुरा गर्ने छौं।
छविमा जुन हामी तल छौं तपाई यसलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग स्क्रीनशट छ, तर तल भिन्न छ। जहाँ स्क्रिनमा सामान्यतया तीन बटनहरू देखा पर्दछ, अब यसको केही पनि बाहिर आउँदैन र हामीसँग नेभिगेसन बार छ। के धेरैले इशारा नेभिगेसन एन्ड्रोइड पी मा आउँदैछ भन्ने संकेतको रूपमा लिएका छन्।
अब सामान्य तीन बटनहरूको सट्टामा हामी एउटा सानो नेभिगेसन बार र पछाडि बटन देख्न सक्छौं स्क्रिनमा। त्यसकारण, यो सम्भव छ कि अपरेटि system प्रणालीमा गेस्स्ट्रल नेभिगेशनले यो सानो नेभिगेसन बार मात्र प्रयोग गर्दछ जब यो प्रयोग हुन्छ।
यद्यपि अहिलेसम्म कसैले पनि यो इशारा नेभिगेसन एन्ड्रोइड पीमा कसरी काम गर्छ भनेर देखेको छैन। त्यसोभए बढी भन्नु शुद्ध अनुमान हो। तर यस स्क्रिनशटले धेरै प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दै छ र तपाईं यो सुविधा ओएसमा आफ्नो बाटो बनाउने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
अधिक संभावना मेमा, गुगल आई / ओ २०१ during को बखत एन्ड्रोइड पी को बारेमा अधिक जानकारी ज्ञात छ। थप रूपमा, यो यी मितिहरूको बीचमा हुनेछ जब अपरेटिंग प्रणालीको दोस्रो अघिल्लो संस्करण जारी हुन्छ। अधिक सुविधाहरू त्यसपछि यो इशारा नेभिगेसन सहित उपलब्ध हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » एन्ड्रोइड पीसँग आईफोन एक्स जस्ता इशाराहरू पर्दामा हुन सक्छ